Coronavirus IgG & IgM Tijaabada Warshadaha Cassette Cassette iyo alaab-qeybiyeyaasha | New Aasiya Pacific
Cont Xirmooyinka Xirmooyinka】
· Qoraalada jeebka kujira: Cassette test, Desiccant.
· 100 tuubooyin xaraash (20 µl) 100 baaritaan.
· 12 ml muunad wax lagu buufiyo ah oo ah 100 baaritaan.
· Tilmaanta imtixaanka.
25 xabbo / sanduuq, duminta sanduuqa 15 * 14 * 6.5cm,culeyska sanduuqa waa 150g.
100 Boxes / kartoon, cabbirka kartoonada 72 * 62 * 36cm,22KGS.
Use Isticmaal la doonayo】
Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test waa mid dhakhso ah, tayo leh oo ku habboon immunochromatographic in vitro dib u eegis ku ogaanshaha kaladuwan ee ka hortagga unugyada IgM & IgG ee fayraska COVID-19 ee ku dhaca bini-aadamka, plasma ama samballada dhiigga oo dhan oo laga helo bukaanka qaba cudurka COVID-19. Aaladda waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo go'aan ka gaarista soo-gaadhistii ugu dambeysay ama hore ee fayraska COVID-19 ee la socodka heerka cudurka ka dib caabuqa COVID-19.
Qiimeyntan ayaa kaliya bixinaysa natiijo hordhac ah. Natiijooyinka togan macnaheedu maahan infekshan hadda jira, laakiin waxay matalaysaa marxalad kale oo cudurka ka dib caabuqa. IgM positive ama IgM / IgG labaduba waa togan waxay soo jeedinayaan soo-gaadhis dhowaan, halka IgG toganna ay soo jeedinayso infekshan hore, ama infekshan qarsoon.
Infekshanka hadda waa in lagu xaqiijiyaa Real-Time Reverse Transcriptase (RT- PCR) ama taxanaha hidaha. Tijaabada waxaa loogu talagalay isticmaalka xirfadle.
Mabda 'Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Test waa tijaabinta immunochromatographic assay ee baaritaanka isku mar iyo kala-soocida unugyada IgM & IgG ee fayraska COVID-19 ee unugyada bini'aadamka, Plasma, ama sambalka dhiigga oo dhan. Fayruuska covid-19-
dawooyinka antigens-ka gaarka ah waxaa loo dajiyaa dahab qalin leh oo waxaa lagu ridayaa suufka conjugate. Monoclonal anti-aadanaha IgM iyo monoclonal anti-aadanaha IgG waxaa lagu dulsaaray laba khad oo tijaabo ah (T2 iyo T1) xuubka nitrocellulose. Xariiqda IgM (T2) waxay u dhawdahay muunadda si fiicanna waxaa raacaya khadka IgG (T1). Markii shaybaarka lagu daro, dahabka-antigen conjugate ayaa la fuuq celiyaa iyadoo COVID-19 IgM iyo / ama unugyada difaaca jirka, haddii mid ka mid ah muunadda, uu la falgalayo antigen-ka daweynta sunta. Tallaalka immunocomplex wuxuu u guuri doonaa dhinaca daaqadda imtixaanka ilaa aagga baaritaanka (T1 & T2) halkaas oo ay ku qaban doonaan IgM (T2) iyo / ama ka hortagga aadanaha ee IgG (T1), oo sameynaya xariijin muuqata oo casaan ah, oo muujineysa natiijooyinka togan. Haddii unugyada difaaca jirka ee COVID-19 ay ku maqan yihiin
muunad, xariiq midab casaan ah kama muuqan doono xariijimaha baaritaanka (T1 & T2), taasoo muujineysa natiijo aan fiicneyn.
Si loogu adeego sida kontoroolka nidaamka gudaha, xariijinta koontaroolka waa inay had iyo jeer ka muuqataa Soonka Aaladda (C) ka dib marka baaritaanka la dhammeeyo. Maqnaanshaha khadka koontaroolka casaanka ee aagga Kontaroolka ayaa calaamad u ah natiijo aan sax ahayn.
Ced Nidaamyada Tijaabinta】
Qalabka baarista ka saar boorsada shaabadaysan adigoo gujinaya
feejignaanta oo dhig qalabka baarista sagxad sare oo qalalan.
Faraha faraha oo dhan:
Adigoo isticmaalaya tuubbo madax furan, ururin faraha faraha oo dhan dhiigga illaa khadka madow.
Loogu talagalay dhiigga oo dhan:
Adigoo isticmaalaya tuubbo-tuubbo ama tuubbooyin madax furasha ah, ururi dhiigga dhiiga ka baxda (20µl).
Loogu talagalay serum / plasma:
Adigoo isticmaalaya tuubbo-guntin, aruur shahwada / plasma (10µl).
Kudar urursiga dhiiga / plasma / dhiiga oo dhan garka sare (u dhaw daaqada tijaabada) ee saamiga si fiican qalabka tijaabada ah hawo hawo ah (ku qabo tuubada / tuubada madaxa si toosan oo si tartiib ah taaban dhamaadka dhamaadka suufka muunad si fiican ugu wareejinta. ).
Sug 20-30 ilbiriqsi; ku dar 2 dhibic (qiyaastii 90µl) oo ka mid ah saamiga muunadda kaadida saamiga qalabka tijaabada.
Akhri natiijooyinka ka dib 15-20 daqiiqo. Muunadaha tijaabada ee adag waxay soo saari karaan natiijo togan sida ugu yar ee 1 daqiiqo ah.
HA ISKU DARIN jawaabaha ka dambeeya 30 daqiiqo.
Pret Tarjumaadaha natiijooyinka
Xarig midab leh oo midab leh oo midab leh ayaa ka muuqda oo keliya gobolka ay gacanta ku hayso (C), taasoo muujineysa natiijo xun caabuqa COVID-19.
Xirmooyin midab leh oo midab leh ayaa ka muuqda gobolka xukunka (C) iyo T1 iyo / ama T2 gobolka.
1) IgM iyo IgG togan, faashado muuqda oo laga helo T2 iyo T1, oo muujinaya natiijo togan oo ku saabsan cudurka suurtagalka ah ee COVID-19.
2) IgM togan, waa koox muuqata oo laga helo gobolka T2, oo muujineysa natiijo fiican oo ah cudurka COVID-19.
3) IgG positive, waa koox muuqata oo laga helo gobolka T1, oo tilmaamaysa natiijo togan oo ku imaan karta cudurka COVID-19.
Ma jiro koox muuqata oo ka jirta gobolka kantaroolka (C). Ku celi qalab cusub oo tijaabo ah. Haddii tijaabadu wali ku guul darreysato, fadlan la xiriir adeeg-bixiyeyaasha oo leh nambarka badan.
Hore: Tuur tuur
Xiga: Wejiga Wejiga
Qalabka Tijaabada Imtixaanka Coronavirus ee 2019 Ncov Novel
Tijaabada Degdega ah ee Novel Coronavirus
Qalabka Tijaabada Cudurka Sanadka 2019-Ncov
2019-Ncov Igg / Igm Tijaabada Degdega ah ee Coronavirus
2019-Ncov Degdega Tijaabada Coronavirus
Qalabka Tijaabada Degdega ah ee Ncov-2019
Qalabka Tijaabada Imtixaanka 2019-Ncov
Kaadida Antibody Igm / Igg Test Kass
Qalabka Imtixaanka Antibody Igm / Igg
Cassette Test Cassette
Qalabka Tijaabada Kahortagga Antibody
Cassette Testing Cassette
Shiinaha Ka hortagga Igwe / Igg Test Cassette
Qalabka Tijaabada ah ee loo yaqaan 'Anti Anti Ig Ig / Igg Test Kit'
Cassette Test Shiinaha
Qalabka Tijaabada Kahortagga ee Shiinaha
Baadhitaanka Cassette Shiinaha
Shaashadda Tijaabada Tijaabada Dahabka ee Shiinaha
Qalabka Tijaabada Dahabka ee Shiinaha
Baadhitaanka Tijaabada dahabka ee Shiinaha
Qalabka Tijaabinta Dahabka ee Shiinaha
Poronavirus Shiinaha Shiine ah
Cassette Surrenavirus Shiine Tijaabada Degdegga ah ee Shiinaha
Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Coronavirus ee Shiinaha
Baadhitaanka Degdega ah ee Coronavirus China Cassette
Sawirka Baadhitaanka Naasaha ee Coronavirus ee Shiinaha
Qalabka Tijaabada Iskeelka ee Coronavirus ee Shiinaha
Xirmooyinka Tijaabada Iskudhafka Coronavirus ee Shiinaha
Baadhitaanka Naasaha ee "Coronavirus"
Qalabka Tijaabada Iskudayidda Coronavirus ee Shiinaha
Qalabka Iskudayida Coronavirus ee Shiinaha
Cassette Surrenavirus China
Qalabka Tijaabada Coronavirus ee Shiinaha
Tijaabada baarista Coronavirus ee Shiinaha Cassette
Awoodda Shiinaha ee loo yaqaan 'Covid Poct'
Cassette Test China
Qalabka Tijaabada Shiinaha
Cassette Testing China Covid Testing
Qalabka Tijaabinta Shiinaha
Cudurka Shiinaha ee Cilmiga Daweynta
Qalabka Baadhista Cilmiga Shiinaha
Baadhitaanka Cilmiga Baadhista Shiinaha
Qalabka Tijaabada Baaritaanka Shiinaha
Baadhitaanka Baadhitaanka Cudurka Shiinaha
Cassette China Igm / Igg Test
Qalabka Tijaabada Imtixaanka Shiinaha Igm / Igg
Cassette Cilmiga Caafimaad ee Shiinaha
Qalabka Baadhista Caafimaadka ee Shiinaha
Baadhitaanka Baadhitaanka Caafimaadka ee Shiinaha Cassette
Qalabka Tijaabada Baaritaanka Caafimaadka Shiinaha
Baadhitaanka Tijaabada Caafimaadka ee Shiinaha Cassette
Cassette Test Degdeg ah oo Degdeg ah Shiinaha
Qalabka Tijaabada Degdega ah ee Shiinaha
Qalabka Imtixaanka Degdega ah ee Shiinaha
Cassette Test Degdeg ah Shiinaha
Baadhitaanka Degdega ah ee Shiinaha Cassette
Qalabka Tijaabinta Degdega ah ee Shiinaha
Cassette Raadinta Cudurka Fudud ee Shiinaha
Qalabka Tijaabada Fayraska Degdega ah ee Shiinaha
Cassette test Reaent Shiinaha
Qalabka Tijaabada Reagent ee Shiinaha
Qalabka Imtixaanka Reagent ee Shiinaha
Cassette Reinent Tijaabinta Shiinaha
Qalabka Tijaabada Imtixaanka Shiinaha
Cassette tijaabada Shiinaha
Cassette Gold Test Colloidal
Qalabka Tijaabinta Dahabka ee Colloidal
Colloidal Dahabka Tijaabada Dahabka
Tijaabada Degdegga ah ee Coronavirus Ag
Baadhitaanka Coronavirus Ag
Baadhitaanka Kahortagga Coronavirus
Tijaabada Degdega ah ee Coronavirus Antigen
Qalabka Tijaabada Imtixaanka Coronavirus Antigen
Tijaabada Baadhista Coronavirus
Tijaabada Qalabka Coronavirus
Qalabka Tijaabada Degdegga ee Coronavirus
Coronavirus Baaritaanka Covid-19
Xirmooyinka Tijaabada Degdega ah ee Coronavirus
Qalabka Tijaabada Caafimaadka ee Coronavirus
Baadhitaanka Coronavirus Igg Igm
Tijaabada Baarista Coronavirus Igg / Igm
Baadhitaanka Coronavirus Igg / Igm
Tijaabada Degdegga ah ee Coronavirus
Cosenavirus Degdegga Cassette Test
Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Coronavirus
Baadhitaanka degdega ah ee Coronavirus Cassette
Tijaabadooyinka Degdega ah ee Coronavirus
Cassette Coronavirus Iskeelka Tijaabada
Qalabka Tijaabada Iskudayidda Coronavirus
Xirmooyinka Baadhista Coronavirus
Cosenavirus Isaga Baadhista Cassette
Qalabka Tijaabada Isirka ee Coronavirus
Qalabka Iskudayida Coronavirus
Saxnimada Baarista Coronavirus
Baadhitaanka Coronavirus Cassette
Qalabka Tijaabada Coronavirus
Qalabka Tijaabada Coronavirus Ee Aadanaha
Qalabka Tijaabada Coronavirus Allblood
Baadhitaannada Baaritaanka Coronavirus
Xalka Tijaabada Coronavirus
Cassette Coss Test
Qalabka Tijaabada Qalabka
Qalabka Tijaabada Degdega ah ee Covid-19
Cassettes Tijaabooyinka 'Covid-19'
Qalabka Tijaabada Covid-19
Qalabka Imtixaanka'vidvid-19 '
Qalabka Baadhista cudurka
Cassette Test Test
Qalabka Tijaabada Baaritaanka
Xirmooyinka Tijaabada Baaritaanka
Tijaabada Coronavirus Human
Cassette Igm & Igg Test
Qalabka Tijaabada Igm & Igg
Cassette Igm / Igg Test
Qalabka Tijaabada Igm / Igg
Qalabka Baadhista Caafimaadka
Baadhitaanka Tijaabada Caafimaadka
Qalabka Tijaabada Baaritaanka Caafimaadka
Qalabka Imtixaanka Baarista Degdega ah
Cassette Reusent Test Degdegga ah
Qalabka Tijaabada Degdega ah ee Degdega ah
Qalabka Imtixaanka Degdega ah ee Degdega ah
Cassette Test Degdeg ah
Qalabka Tijaabada Degdega ah
Qalabka Tijaabada Degdega ah Qiimaha
Jawiga Tijaabada Degdega ah
Qalabka Tijaabinta Degdegga ah
Cassette Raadinta Degdega ah ee Virus
Qalabka Tijaabada Viruska Degdega ah
Cassette Test Reagent Reass
Qalabka Tijaabada Reagent
Qalabka Imtixaanka Reagent
Cassette Regent Rearent Test
Xirmooyinka Tijaabada Reagent
Biyaha-Proof Hdpe Apron, Go'yaal ilaalin ah, Dharka Ilaalinta, Biyo-caddeynta Biyaha, Dust-Proof Pet Face Shield, Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo,